Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Amos 6
Nepali New Revised Version, Amos 6
1 धिक्‍कार तिमीहरूलाई, जो सियोनमा निर्धक्‍कसित रहन्‍छौ, र तिमीहरूलाई, जो सामरियाको डाँड़ामा आफू सुरक्षित ठान्‍छौ। तिमीहरू प्रथम जातिका ख्‍याति प्राप्‍त भएका मानिसहरू, जसकहाँ इस्राएलका मानिसहरू आउँछन्‌!
2 कल्‍नेहमा गएर त्‍यहाँ हेर। त्‍यहाँबाट महान्‌ हमातमा जाओ। त्‍यसपछि पलिश्‍तीहरूको गातमा जाओ। के ती राज्‍यहरूभन्‍दा तिमीहरू असल छौ र? के तिनीहरूको भूमि तिमीहरूको भन्‍दा ठूलो छ र?
3 तिमीहरू दु:खको दिन पन्‍छाउँछौ, त्रासको राज्‍य नजिक ल्‍याउँछौ।
4 तिमीहरू हस्‍तिहाड़ले जड़ेका पलङ्गमा सुत्‍छौ, र आफ्‍ना-आफ्‍ना गद्दीहरूमा लम्‍पसार पर्छौ, र तिमीहरू उत्तम भेड़ाहरू र मोटा बाछाहरू खान्‍छौ।
5 तिमीहरू दाऊदले झैँ वीणा बजाउँछौ, र सङ्गीतका बाजाहरूमा तत्‍कालै धुन रच्‍छौ।
6 तिमीहरू ठूला-ठूला कचौरामा दाखमद्य पिउँछौ, र सर्वोत्तम तेल लगाउँदछौ, तर योसेफको विनाशमा केही अफसोस गर्दैनौ।
7 यसकारण निर्वासनमा जानेहरूमध्‍ये तिमीहरू पहिला हुनेछौ, र तिमीहरूका भोज र मोजमज्‍जा समाप्‍त हुनेछन्‌।
8 परमप्रभु परमेश्‍वरले आफ्‍नै नाउँमा शपथ खानुभएको छ। सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु परमेश्‍वर घोषणा गर्नुहुन्‍छ: “म याकूबको घमण्‍डलाई घृणा गर्छु, र त्‍यसका किल्‍लाहरूलाई तुच्‍छ ठान्‍छु। म यसमा भएका सबै कुरासमेत यस सहरलाई शत्रुको हातमा सुम्‍पिदिनेछु।”
9 यदि एउटा घरमा दश जना मानिस बाँकी रहेका छन्‌ भने, तिनीहरू पनि मर्नेछन्‌।
10 जब कसैको कुटुम्‍बले, जसले लाशहरू जलाउनेछ, घरभित्रबाट लाश निकाल्‍न भनी आएर त्‍यहाँ लुकेकालाई “तिमीसित अझ अरू कोही छ?” भनी सोध्‍छ, अनि उसले जवाफ दिन्‍छ, “अँहँ, छैन,” तब त्‍यसले भन्‍नेछ, “चूप लाग, हामीले प्रभुको नाउँ लिनैहुँदैन।”
11 किनकि परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको छ, र उहाँले ठूलो घर टुक्रै-टुक्रा र सानो घर धूलोपीठो पार्नुहुनेछ।
12 के घोड़ाहरू चट्टानहरूका भिरालामा दगुर्छन्‌? के कसैले त्‍यहाँ गोरु जोत्‍छ? तर तिमीहरूले त न्‍यायलाई विष र धार्मिकताका फललाई तीतोपन बनाएका छौ–
13 तिमीहरू जसले लो-देबारको पराजयमा आनन्‍द मनाउँछौ, र भन्‍छौ, “के हामीले आफ्‍नै बलले कार्नैम लिएनौ?”
14 “हे इस्राएलका घराना हो,” सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ, “म तिमीहरूका विरुद्धमा एउटा यस्‍तो जाति सुर्‍याउनेछु, जसले तिमीहरूलाई लेबो-हमातदेखि लिएर अराबाको उपत्‍यकासम्‍मै अत्‍याचार गर्नेछ।”
Amos5Choose Book & Chapter Amos 7